Ogaden News Agency (ONA) – Sh. Shakuul oo Islii-Mall u soo raray dagalkii ka socday Ogadenya
Sh. Shakuul oo Islii-Mall u soo raray dagalkii ka socday Ogadenya
Waxaan cidna ka daahsoonayn maanta shirqoolada ay maleegayaan kuwii heshiisyada kula soo galay KT Meles inay halganka gobanimadoon ee ka socda Ogadenya soo afjaraan, ka dibna abaalmarin looga dhigo in shirkadahooda ay la wareegaan Ogadenya. Hadaladii uu yidhi Sh Shakuul markuu ka soo noqday socdaalkii uu ku tagay Adisababa iyo Jigjiga lama iloobin. Waxaan soo arkay dal dihin oo khayraadka uu ceegaago, iyadoo markii wax laga weydiiyay dhibaatada dadka haysata iyo cadaadiska iyo cadaabka gumaysiga Itobiyana yidhi intaan dhex socday Ogadenya kuma aanan arkin wax saldhig ah oo ciidanka Itobiya ay ku leeyihiin. Idan arintiisa banaanka ayay taalay iyo ujeedada uu ka leeyahay Sh. Shakuul inuu aaso qadiyadda shacabka S.Ogadenya ee awoowayaashiisii la soo factirsatay.
Nafta wax ka qaalisan oo qofka bani-aadamka uu huro ma jirto. Waxayna ogsoonyihiin kooxdii shalay dadka ku shirisay Islii-Hall in Ogadenya uu ka socdo halgan hubaysan oo maalin walba ay ku shihiidayaan wiilal iyo gabdho naftooda u hibeeyay inay umadooda ku xoreeyaan gumaysiga oo qaali ah ka ah agtanada. Waxay ogsoonyihiin diidamada aan diidnay gumaysiga Itobiya darteed in shacabkeena loo ciqaabayo oo maalinwalba dadweyne aan waxba galabsan ay ku leynayaan miyiga ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Cabdi ilay-ga soo diray uu qoray. Waxay ogsoon yihiin dilka, kufisga, xadhiga aan aabayeelka lahayn ee ka socda dalka. Iyagoo intaasoo idil ogsoon hadday ku dhiiradeen inay soo horjoogsadaan dadweyne intaasoo dhibaata ah tirsanaya oo Ibraahim dheere uu yidhaahdo sida ay qortay OgadenToday – — jawaabo uu bixiyay Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen oo ku saabsanayd in Meles Zenawi uu dan u yahay dalka iyo dadka Ogaadeeniya. – waxaan filayaa dhibka soo gaadhay inuu yahay midkii ugu yaraa ee marxaladaa iyo goobtii la joogay loogu gaysan lahaa.
Hadday doonayaan Sh. Shakuul iyo Shibili iyo inta la aaminsan fikirka ah hala taageero is-dhiibidda Ibraahim dheere, in sidii suufiyadii gacanta looga dhunkado oo waxay sheegaanba loo yidhaahdo awliyadii ayaa tidhi, haka baxaan sheekashada salafiyiin ayaan nahay oo xadrada hanoo jiibiyaan.
Waxaan aad uga xunahay oo ceeb aan waligeed ka hadhin ku ah Sh Shakuul sida ay qoreen saxaafadda inuu ku bixiyo 100,000 oo laaluush ah oo xaaraan ay tahay in la bixiyo si loo xidho laba wiiloo uu adeer u yahay. Taasoo aduunkiina aan waxba uga tarin aakhirana ay ku sugayso xisaabteeda. Waxaa kaloo aan ka xunahay inuu Sh.Shakuul dagaalkii ka socday Ogadenya uu u soo raray Islii-Mall oo maanta loo kala baxay qaar gumaysiga u ololeynaya oo isaga iyo inta ku xeeran ay maalgalinayaan iyo qaar ka soo horjeeda oo diyaar u ah inay naftooda u huraan difaaca sharafta halgankeena.
Kooxdan uu horboodayo Shakuul iyo kuwa la socda ee suuqii Islii uu qaadi waayay, ee hadda doonaya inay Ogadenya kula wareegaan hab raqiis ah, waxaa la gudboon inay taariikhda dalka Ogadenya dib u akhriyaan oo aanay sharaftooda (hadday in un ku hadhay) ku waayin wax aan suurtagal ahayn.
Ugu dambayntii waxaan leenahay Ogadenya way xoroobi Inshaa Alaah. Gumaysiga Itobiyana meeshii ay mareen gumaysiyadii caalamka umbay marayaan.